ERP implementations လုပ်မယ် ဆိုရင် ဘာတွေ သိထားသင့်ပါလဲ ? – BEE Data Myanmar
ERP implementations လုပ်မယ် ဆိုရင် စီမံခန့်ခွဲမှု အပိုင်းတွေမှ ဘာတွေ သိထားသင့်ပါလဲ ?
ပြောင်းလဲမှုတွေအမြဲဖြစ်ပေါ်နေသလို ယှဉ်ပြိုင်မှုတွေ အားကောင်းလာခြင်းများနှင့်အတူ Online ကမ္ဘာကြီးမှာ Demand တောင်းဆိုချက်တွေ လိုအပ်ချက်တွေ လုပ်ဆောင်ဖို့ ERP နည်းပညာတိုးတတ်မှုတွေ ပေါ်ထွန်းလာတာ ဖြစ်ပါတယ်။
ခေတ်ရဲ့ ရေစီးချောင်းများနှင့်အတူ Digitalize business တွေ ပြောင်းလဲတာနှင့်အမျှ လုပ်ငန်းများရဲ့ စီမံခန့်ခွဲမှုတွေမှာ Outdated ဖြစ်သော Business Modern လိုအပ်ချက်တွေအပေါ်မှ ခေတ်နှင့်အညီ လိုသောအချက်အလက်များ ၊အတွေ့အကြုံ များပေါ်မှမူတည်ပြီး Management Techniques တွေနဲ့ ပြန်လည် ဆန်းသစ်ထားတဲ့ စနစ်တစ်ခုလည်း ဖြစ်ပါတယ်။ ဒါကြောင့်မို့ သင့်ရဲ့ အဖွဲ့ ကို ကောင်းစွာ စီမံမှုနိုင်ဖို့ရန် ERP Implementation အကောင်ထည်ဖော်ဆောင်နေစဉ် သိထားသင့်သည့် အောက်ပါ အချက်အချို့ ကို ဖော်ပြလိုက်ရပါတယ်။
✅ လုပ်ငန်း တစ်ခုလုံးမှာ ပါဝင်ဆောင်ရွက်နေကြရတဲ့ ဌာန အသီးသီး ရဲ့ သက်ဆိုင်ရာလုပ်ငန်းစဉ်များ မှာတာဝန်ယူဆောင်ရွက်နေကြသော ဝန်ထမ်းများ၏ လုပ်ငန်းမှာလိုအပ်သော အမြင်များကို ရယူဖို့ လိုအပ်ပါတယ်။
✅ ဌာနတစ်ခုမှ ERP System အသစ်ကို ပြောင်းလဲ အသုံးပြုချင်းဖြင့် တစ်ခြား ဌာနမှ ဝန်ထမ်းတွေ မှာလည်း အကျိုးသက်ရောက်မှု ရှိကြောင်း သိရှိထားရမှာလည်း ဖြစ်ပါတယ်။
✅ ERP ကို အသုံးပြုခြင်းဖြင့် ဌာန တစ်ခုကImplementation တစ်ခုကို အားစိုက်လိုက်ရုံဖြင့် တခြား ပက်သက်ဆက်နွယ်သည့် တခြားသက်ဆိုင်ရာ ကိုလည်း Result ခံစားရမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ လုပ်ကိုင်ရမယ့် အလုပ်များ မည်သို့သက်သာလာမည် ဖြစ်ကြောင်း၊ အချိန်တွေ ပိုထွက်လာမည် ဖြစ်ကြောင်း သိရှိထားရမှာလည်း ဖြစ်ပါတယ်။
✅ Team များအကြား Progress များ Meeting များ Update Management များစသည့်ဖြင့် ပူပေါင်းဆောင်ရွက်ခြင်း၏ ရလဒ်များ၊ Organization’s တစ်ခုလုံး ပါဝင်သည့် မည်သူမဆိုCommunication များလည်း အချင်းချင်း ဆက်သွယ် နိုင်လာမယ် ဖြစ်ပါတယ်။
✅ ERP Implementations မှ Opportunities များနှင့် Risks များကိုလည်း အားလုံး တစ်စိတ်တစ်ဝမ်းတည်းမှာ ရရှိခံစားရမည်များကိုလည်း သိရှိထားရမှာ ဖြစ်ပါတယ်။
✅ Cloud Platforms မှတစ်ဆင့်အလိုအလျောက် အချိန်နဲ့တပြေးညီ Reporting လုပ်ဆောင်ပေးနိုင်ပါတယ်။ လက်ရှိလုပ်ငန်း၏ အခြေအနေများ Analysts လုပ်လာနိုင်မှာ ဖြစ်သလို ရှေ့ဆက်ရမည့် Business Strategy နဲ့ Future Plan များ ၊ Costs များ၊ Profits များ၊ Viability များကိုလည်း အမှန်အကန် Forecasts တွေ ပြုလုပ်နိုင်မှာ ဖြစ်ပါတယ်။
✅ ဝန်ထမ်းများအနေနဲ့လည်း လက်ရှိစွမ်းဆောင်ရည်များအပြင် နည်းပညာတစ်ဘက်က ERP ရဲ့ New Skills များကိုလည်း ပူးတွဲလုပ်ဆောင်ရသည့်အတွက် Business ရဲ့ Value က ပိုမို မြင့်တတ်လာမှာ ဖြစ်ပါတယ်။
✅ လုပ်ငန်းရဲ့ ကိစ္စ အလုံးစုံမှာ ပိုမိုလွယ်ကူလာပြီး မြန်ဆန်စွာ ဆောင်ရွက်လာနိုင်ခြင်းဟာဖြင့် ERP ပြောင်းလဲ အသုံးပြုခြင်းရဲ့ အကျိုးခံစား ရလာမှာ ဖြစ်ပါတယ်။